Maitiro ezhizha rino 2022 | Stylish Men
Alicia tomero | 06/06/2022 10:25 | Updated on 07/06/2022 12:57 | Footwear, Kuchengetwa kwega, fashoni, Trends
Muzhizha rino tine huru yakanyanya kunaka uye inotonhorera siyana yegore rino 2022. Iwe haugone kupotsa kunyaradza, ane t-shirts akajeka uye zvishoma nezvishoma akanyarara uye akapfava mavara. Iine mutsara unomutsa kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye nezvinhu zve organic mavambo, ivo vanogara vachienderana nemaitiro ezhizha rino ra2022.
Munzira iyi tine maIcons akateedzana Pedri Gonzalez weSpringfield, iyo yemwaka uno, inobatsira pakuvakwa kweramangwana, nenguvo dzakagadzirwa kubva kune zvakashandiswa zvakare uye ne teknolojia inobvumira kuchengetedza mumvura, simba uye makemikari. Kuwedzera kuzvipira uye kunetseka nezve kuchengetedzwa kwepasi.
Iyi yezhizha maitiro anosanganisira akawanda emitambo zvipfeko, kuzvirumbidza kuva yakasununguka zvikuru kupfuura mumwaka wapfuura uye nezvakakosha izvo zvinoshandiswa se zvipfeko zvemazuva ese uye zvekutanga. Iwo maprints haagone kushaikwa zvakare, senge chiedza, chinofema uye pamusoro pezvose shangu dzakanaka. Isu tinoongorora madiki nuances anoratidza chimwe nechimwe chinhu:
1 Bermuda shorts kusvika pamabvi
4 Bhurugwa refu
Bermuda shorts kusvika pamabvi
Shorts ndiyo inogara ichikunda muzhizha. Mumwaka wapfuura pakanga pane predilection kune pfupi pfupi pfupi, asi gore rino parikutsvagwa chiyero. Vanosimbisa iyo bhurugwa rakanyanyisa, nokuda kwekunyaradza kwakawedzerwa, uye nekureba kunosvika pamabvi, pasina kudarika.
Kuumbwa kwairi kubhejera ndiko tambanudza jira redenim, bhurukwa remvere rinogadzirwa ne100% yekotoni uye shorts iri nyore kwazvo, ine nylon uye spandex.
Zhizha rino rakazvipira kune pamusoro pematangi, yakagadzirwa netambo uye nezvimwe zvakawanda ushingi. Asi akareruka, anogara akakodzera, mapfupi-sleeved t-shirts akagadzirwa kubva kune zvakagadziriswa zvakare anosarudzwa. The mavara anogara asina kwaakarerekera uye akasiyana zvakanyanya, yakagadziridzwa kune ese marudzi ekufarira, neimwe mhando yekudhindwa kana logo. Iyo polo type slim fit tUye haina kusiiwa parutivi, kushuma yakajairika, yemitambo uye inoyevedza chimiro chembatya.
T-shirts Sezvo mutemo mukuru, ivo vachava ne baggy uye oversized look, kugadzira kunyaradza kwakanyanya uye chimiro. Iyo pfungwa ndeyekugadzira nyowani uye yakasununguka silhouette, kunyangwe t-shirts inomaka muviri kana slim style.
Mapango haagone kushaikwa, nguva dzose chords kune chero maitiro. Yakave yakagadzirwa mukati piqué zvinhu zvine kukwana nguva dzose, ane maoko mapfupi uye ane kodak stripe collar. Ruzhinji yakagadzirwa ne100% donje uye nekuvandudzwa kwedonje Better Cotton, chirevo chitsva chekushandisa patsva zvinhu.
Majuzi haagone kushaikwa kwemazuva kana husiku apo kupisa kusingaenderane. Vanofanira kuva nemutsara wavo, sezvo wavo jira rinofema uye organic donje, uye nehutete hwakanyanya. Mavara emwaka uno akanyanya pastel.
Bhurugwa zvinounzwa nazvo iyo slim fit shape nekugadzirwa kwehomwe shanu. Nemachira anobvumira kudikitira uye akaitwa nekungwarira zvinhu. Tine avo vane chitarisiko chakaunyana kana kusakara uye neyakasiyana, inogeza neECO-WAH inoitwa nelaser.
the chino pants Vanogara vari mumaitiro ese uye vasvika pakuzvimisa sechipfeko chakasiyana-siyana. vese navo mavara akapfava ezhizha rino uye nemachira zvinoenderana nekupisa uye nekunyaradza kwekuve elastic.
MaChinese anozviratidzawo mucheka werineni, ine ecru drawstring pachiuno uye mutsara weshinda inosiyanisa nedhirowa. Ivo vakanyatsogadzikana uye vaporous kumisangano yezhizha.
Havagoni kupotsa vanomhanya, nguva dzose inosiyana-siyana kune chero mwaka. Yakagadzirwa ine elastic waistband ine drawstring uye stretch twill cuff. Mukugadzira kwavo havagone kupotsa homwe dzeparutivi, kunyangwe gare gare vane bhatani rakavharwa pachiuno nezipi yaro inoenderana.
Iyo hembe Zvezhizha rino Vane maoko marefu asi yakagadzirwa nedonje kana yemucheka, kana misanganiswa yose miviri, kuti vapfekedzwe pasina kupisa kukuru. Iwo akagadzirwa ne iyo yekirasi yenguva dzose yakakodzera kucheka, ine mitsetse uye mavara akapfava anoenderana nechena. Pasina kupokana, tinogona kuwana mavara akasiyana-siyana, kubva kuhembe chena kusvika kune dema uye mazhinji acho kuvapfekedza. zvakajairika, zvemitambo uye zvinoyevedza chimiro.
Kwemwaka wezhizha tinopa nzira The espadrilles, yakagadzirwa nemucheka wekotoni uye nehuwandu hwe mavara akasimba uye akanyarara, kuenzanisa kusarudzwa kwose kwenguvo dzezhizha. Count on rubber chete uye yakasimbiswa jute yakasikwa uye netambo dzekugadzirisa tsoka kune shangu.
Shangu dzemudhorobha Ivo havagone kushaikwa kana, vakagadzirwa organic donje zvinhu uye mutsetse mukati. Zvigunwe zvezvigunwe uye chitsitsinho zvakasimbiswa nerabha, zvichipa chimiro ichocho chechimiro kune chipfeko chemuguta.
The Casual Skate Shoe Ndiyo imwe yeshangu dzakakodzera dzemazuva anopisa. Iwo akagadzirwa nedonje uye ane humwe hunhu, chidimbu chimwe chine dehwe kumusana. Ivo zvakare vane natural cork insole uye mbishi-toni rubber sole.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Stylish Varume » Kuchengetwa kwega » Maitiro ezhizha rino 2022